Tigiraay "naannoo of dandeesse" gochuun mala jedhe TPLF - BBC News Afaan Oromoo
Paartiin mootummaa naannoo Tigiraay bulchaa jiruufi miseensota ADWUI afran keessaa tokko ta'e TPLF, Tigiraay naannoo of dandeesse (de facto state) gochuuf yaada qabaachuu hime.
Barruu ejjennoo dhaabichaa ibsu Wayin jedhamu Kibxata darbe maxxanfame irratti, TPLF akka jedhetti Itoophiyaatti filannoon biyyaalessaa dirqama gaggeeffamuu qaba.
Akka barruu kanaatti TPLF filannoo bara 2020tti karoorfame dabarsuuf yaada qabu jechuun Ministira Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad (PhD) qeeqeera.
Walitti bu'insa bakka gara garaatti itti fufinsaan uumamuufi tasgabbiin dhibuurraan kan ka'e kanneen filannoon akka turu gaafatan baayyeedha.
Filannoo yeroo biraatti dabarsuuf yaaduun heera mootummaa waan cabsuuf "gara rakkoo seera dhabeessummaafi fudhatama dhabuutti geessa" jechuunis akeekkachiiseera.
Filannichi yeroo jedhametti hin raawwatamu yoo ta'e naannoon Tigiray, filannoo mataa isaa akka gaggeessuufi naannoo of dandeessee of bulchitu akka godhus hima barreeffamichi.
Barruun Weyin kan ejjennoon paartichaa ittiin ibsamu yoo ta'u aanga'oonni paartichaas ta'e kan mootummaan naannoo Tigiraay dhimma kanarratti homaa hin jenne.
Ibsi barruu Wayin kanarratti bahe akka ibsetti, TPLF mootummaan MM Abiy Ahimadiin durfamu warreen "humnoota warra of tuultotaa" jechuun ibsutti "dabarfamtee kennamteetti" jedheera.
TPLF erga ADWUIn bara 1991 irraa kaasee biyya bulchaa eegalee kaasee paartii aangoo biyyaa dhuunfachuun ga'ee ol-aantummaa taphachaa tureera.
Image copyright Barruu Wayin
Dhiibbaan TPLF ADWUItiifi mootummaa federaalaa keessatti qabaachaa ture kun garuu erga MM Abiy Ahimad Ebla 2018 gara aangootta dhufanii akka hin jirre ta'eera.
ADWUI adda paartileen afru walitti dhufuun ijaarratan yoo ta'e, MM Abiy Ahimad yeroo ammaa gara paartii tokkootti jijjiiruudhaaf yaalaa jiru.
TPLF garuu yaalii miseensota ADWUI kan walitti baqsuu kana cimsee mormaa jira. Akka TPLF jedhutti wantonni addicha tokko taasisanilleen garee MM Abiy Ahimadiin akka diigamu ta'eera.
Karaa biraatiin, MM Abiy Ahimad paartileen biroo warreen naannolee guddachaa jiranii bakka bu'u jedhaman kan akka Somaaleefi Affaar garuu akka paartii haaraa hundeeffamuuf jirutti makamaniif amansiiseera.
Waajira ADWUI'tti Itti-gaafatamaan Dhimmoota Paartileefi Sivikii Obbo Fiqaaduu Tasammaa gaaffiifi deebii Dhaabbata Pireesii Itoophiyaa waliin taasisaniin, TPLF irraa kan hafe paartileen miseensota ADWUI ta'an biroon sadan sanada qorannoo walitti baquu mallatteessuun fudhachuu isaanii mirkaneessaniiru jedhan.
Akka Obbo Fiqaaduun jedhanitti, walitti baquu kana faayidaa isaa hubatanii akka hojiitti hiikamuuf paartileen deggertoota ta'anis murteessaniiru.
Mufiifi mormiin gama TPLF yeroo ammaa kana dhaga'amaa jiru: "Nuti yoo hin gaggeessine kan jedhuufi yoo nuti ol-aantummaa keenya hin mirkaneeffatiin, waan nuti hin tiqiiniifi nuti [hin qaddasiin] hin ta'u kan jedhurraa kan ka'udha malee bu'uurri seeraafi siyaasaan kamiyyu kan kennamuuf danda'u miti jedhan Obbo Fiqaaduu.
Abbaay Tsahaayyee: Kan gaafatamnus yoo tahe walumaan gaafatamna